सेनाको हेलिकाेप्टर डडेल्धुरामा, सर्वसाधारणद्वारा सडक बन्द
२०७६ कार्तिक २५ सोमबार ११:४९:००
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा डडेल्धुरामा सर्वसाधारणले सडक बन्द गरेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएकाेले थप उपचारको लागि काठमाडौं ल्याउन सेनाको हेलिकाेप्टर डडेल्धुरा पुगेपछि सर्वसाधारणले विरोध जनाउँदै सडक बन्द गरेका हुन् ।
जवसम्म डडेल्धुरा अस्पतालमा सरकारी चिकित्सकको व्यवस्था हुँदैन, तवसम्म आफूले अनसन नतोड्ने डा. केसीकाे अडान छ । उनलाई काठमाडौं पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ ।